Poo Beach | Vaovao momba ny dia
Maria | | Tanànan'ny Espana, Fialan-tsasatra, General
Ny moron-dranomasin'i Poo, ao Asturias, dia miorina ao anatin'ny tontolo voaaro amin'ny morontsiraka atsinanana, kilometatra zara raha miala amin'ny tanàna iantsoana ny anarany.
Ity morontsiraka ity dia manana endrika fantsona hafahafa ary mipetraka eo am-bavan'ny renirano antsoina hoe Vallina River. Rehefa miakatra ny ranomasina dia miditra amin'ny alàlan'ny fantsona izay noforonina rehefa mandeha ny fotoana ary mijanona ho tsy mihetsika ny rano toa ny dobo marivo. Tena voaaro amin'ny onjan-dranomasina ianao, mety tsara ny fitsidihan'ny fianakaviana Poo miaraka amin'ny fianakaviana.
1 Poo Beach Features
2 Ireo nosy Poo Beach
3 Ahoana ny fomba hidirana amin'ny torapasika Poo?
4 Tsidiho i Poo sy Llanes
Poo Beach Features
Ity morontsiraka kanto voasokajy ho semi-natiora ity dia nohajaina tokoa amin'ny tontolo milamina sy milamina ary koa ny fahadiovan'ny rano sy ny halaliny lalina. Amin'ny maha-te hahafanta-javatra, rehefa tonga eo amoron-dranomasina ianao dia tsy mahita ny ranomasina, satria ny fidirana dia lavitra kokoa mankany amin'ny ankavanana.
Betsaka ny olona misafidy ny Poo Beach handany andro vitsivitsy. Tsy noho ny atmosfera mahavariana sy ny hakanton'ilay tontolon'ity dobo emeralda ity sy ny fasika fotsy ihany, fa noho izy feno miaraka amin'ireo serivisy ilaina rehetra handany andro mahafinaritra any ivelany.: paositry ny mpamonjy voina, ranonorana, fitoeran-drano, fanadiovana amoron-dranomasina ... Ho fanampin'izany, eo amin'ny manodidina dia misy trano fisakafoanana sy trano hafa izay mahatonga an'ity torapasika ity ho toerana mety amin'ny mpitsidika sy ny mponina.
Ireo nosy Poo Beach
Ho fanampin'ny fahitan'ny morontsiraka azy dia misy làlana iray izay manomboka amin'ny ilany ankavanan'ny morontsiraka ary mamela anao hisaintsaina ireo hantsana sy nosy akaiky. Ny nosy Castro Pelado no akaiky indrindra amin'ny fivoahan'ny morontsiraka Poo, raha misy atsinanana dia misy vondrona nosy mahatalanjona fantatra amin'ny anarana hoe nosy Castro de Poo, nosy Palo de Poo ary nosy Castro de la Olla.
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny torapasika Poo?
Ny fidirana aminy dia mifandray mivantana amin'ny làlana AS-263. Na eo aza izany, eo akaiky eo ihany koa ny lalan'ny lalamby ary misy toerana fijanonana maromaro ho an'ireo te handeha fiara.
Tsidiho i Poo sy Llanes
Poo dia tanàna kely iray misy kilometatra roa kilometatra avy eo afovoan'i Llanes izay misy mpizahatany maro mitady fifandraisana amin'ny natiora sy ny filaminana. Eto dia maro amin'ireo mpitsidika tonga ao amin'ny Poo Beach no mijanona satria ity tanàna ity dia manana trano, trano fandraisam-bahiny, tranobe ary trano ambanivohitra maro karazana.
Ny tontolo voajanahary ao Poo dia misy hantsam-bato, morontsiraka, nosy, saha ... toerana samihafa handehanana an-tongotra, handro, na hanaovana fanatanjahan-tena eny ivelany.
Azonao atao ny manararaotra ny fitsidihana ny tora-pasika Poo hahafantarana an'i Llanes, tanàna tsara tarehy iray izay hita eo amin'ny ilany atsinanan'ny Asturias. Toa an'i Poo dia tena mangina ny mandany andro sasatra vitsivitsy. Ny tolo-kevitra ara-javakanto dia iray amin'ireo manaitra indrindra ao amin'io faritra io, satria izy dia manana fiangonana sy tsangambato manana ny lanjany lehibe toy ny Palace of the Dukes of Estrada, the House of the Lions na ny hermitage of San Salvador. Ny tanànan'i Llanes taloha dia misy ilay be sandry ary misy ny mariky ny basilika any Santa María del Concejo, iray amin'ireo ohatra lehibe indrindra amin'ny maritrano Gothika ao amin'io faritra io.
Mikasika ny fizahan-tany any ambanivohitra, raha tianao ny fitsangatsangana dia tsy hadinonao ny manao ny iray amin'ireo làlana mankany amin'ny Sierra del Cuera.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Poo Beach
Ny Vatolampin'i Ifach